अटो शो, र म धेरै सम्मानित छु कि नि N्बो डेलको स्पार्क प्लग मैन्युफैक्चरिंग कं, लिमिटेडको डिप्टी जनरल मैनेजर सुश्री याang वेनकिनले अटो पार्टर्स सर्कलको साथ एक विशेष साक्षात्कार स्वीकार्न समय लिन सक्दछ। कम्पनीको आधारभूत अवस्था के हो?
याang Wenqin: Ningbo Delco स्पार्क प्लग निर्माण कं, लिमिटेड २००२ मा स्थापित भएको थियो। यो स्पार्क प्लग, पंजीकृत ट्रेडमार्क LJK.EET को एक पेशेवर निर्माता हो। कम्पनीले मुख्य रूपमा आर एन्ड डी कारहरू उत्पादन गर्दछ, मोटरसाइकलमा विभिन्न प्रकारका प्रतिरोधहरू, बहु-सल्लाहहरू। प्लेटिनम, इरिडियम स्पार्क प्लग। कम्पनीका संस्थापक लू केजुनले आफ्नो अगाडि देखिने दर्शनको साथ एक अपेक्षाकृत अद्वितीय सूत्र पत्ता लगाए र आज उसले डेलको स्पार्क प्लग प्राप्त गर्नु भन्दा २० बर्ष भन्दा बढी समयसम्म शोधमा समर्पण गर्यो।
कम्पनीसँग सबै भन्दा "उन्नत उपकरण" र "जापान कोल्ड सिल प्रोसेस" छ उच्च गुणको स्पार्क प्लगहरू उत्पादन गर्न। उत्पादनहरू सिरेमिकबाट खोल र पाउडर मोहरका सबै कोर भागहरू हुन्। सबै सामग्रीहरू आफैंले उत्पादन गर्दछन्। सख्त गुणवत्ता नियन्त्रण, हालको डेलको स्पार्क प्लग उत्पादनहरू २० भन्दा बढी बर्षदेखि बिक्री भैरहेको छ, चर्चित घरेलू र विदेशी OE ब्रान्डको लागि, र होस्ट समर्थन गर्दै, around० भन्दा बढी देशहरूमा १०० भन्दा बढी ग्राहकहरूको मनपर्दो आपूर्तिकर्ता बन्छ। संसार
अटो पार्ट्स सर्कल: डेल्कोले कस्तो किसिमको नयाँ उत्पादनहरू यस प्रदर्शनीमा ल्याए?
याang Wenqin: यस प्रदर्शनीमा प्रदर्शन गरिएका उत्पादनहरू मूलतः हाम्रो अद्वितीय सूत्र उत्पादनहरू हुन्, जस्तै टर्बो प्रकार, जसको बजारमा7बर्षको परिपक्व अनुभव छ। अब, केहि प्रसिद्ध ब्रान्ड बाहेक, घरेलु ब्रान्ड बाहिर छैन।
Automata: कसरी डेल्को उत्पादन टेक्नोलोजी र कम्पनी टीमहरु मा प्रगति गर्छ?
याang Wenqin: हामी टीम को मजबूत र डिलर को दृष्टिकोण बाट केहि समायोजन र परिवर्तन गर्ने योजना बनाएका छौं। एकै साथ टेक्नोलोजी अपग्रेड गरिएको छ, सेवालाई अझ सुधार गर्न आवश्यक छ।
अटो पार्ट्स सर्कल: चीन-अमेरिकी व्यापार युद्धले यस बर्ष डेलकोमा कस्तो असर पार्छ?
याang Wenqin: यो हाम्रो लागि ठूलो छैन। EET उत्पादनको गुणवत्ता अपेक्षाकृत स्थिर र विश्वसनीय छ, निश्चित रकमको मागको साथ, र ग्राहकहरू अझै पनि मूल्यमा उचित समायोजन स्वीकार्न इच्छुक छन्।
वर्तमानमा कम्पनीसँग स्वचालित उत्पादन उपकरण र एक पूर्ण ईआरपी प्रबन्धन प्रणाली छ। TS16949, 1SO9001 प्रमाणीकरण पारित। हाम्रो कम्पनीको कोर मटेरियल इन्सुलेटरले आइसोस्टेटिक प्रेसिics सिरामिक्स अपनाउँछ, जसमा उच्च घनत्व, उच्च शक्ति र राम्रो इन्सुलेशनको फाइदा हुन्छ। धातुका भागहरू पूर्ण आयामहरूको साथ पूर्ण स्वचालित सीएनसी मेशिनबाट मसिन्छन्। कोर शीट मेटल वेल्डिंग टेक्नोलोजीले जापानको उन्नत स्वचालित degree 360० डिग्री सिमलेस वेल्डिंग प्रक्रिया अपनाउँछ, र उत्पादले न केवल सुन्दर देखा पर्दछ, तर उच्च इग्निशन प्रदर्शन र उच्च ईन्धन दक्षता पनि छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै, दीर्घकालीन ग्राहकहरू डेलको स्पार्क प्लग उत्पादनहरूप्रति विश्वस्त छन्।
अटो पार्ट्स सर्कल: २०१ In मा, डेल्कोको मोडेल, टेक्नोलोजी, मार्केटिंग, आदि को लागि एक नवीन योजना छ?
याang Wenqin: २०१ In मा, यी पक्षहरू योजनाबद्ध र नवीन छन्। ग्राहकहरु र उपभोक्ताहरु को आफ्नो उत्पादहरु को मांगहरु लाई परिवर्तन गर्न को लागी, हामी निरन्तर हाम्रो उत्पादनहरु को गुणवत्ता र प्रदर्शन सुधार गर्न को लागी। थप रूपमा, नयाँ उत्पादनहरू अर्को बर्ष प्रचार गरिनेछ, र टीमहरू केहि सेवा समर्थन गर्न गुणवत्ता डीलरहरूमा पठाइनेछ। २०१ In मा, अटोमोटिभ अफ्टरमार्केटमा प्रतिस्पर्धा अधिक तीव्र हुनेछ। इन्टर्प्राइजेसहरूले फर्म फुटबल्ड प्राप्त गर्न निरन्तर तिनीहरूको उत्पादनहरू, प्रविधिहरू र सेवाहरू समायोजन र सुधार गर्न आवश्यक छ।
२०१ In मा, हाम्रो लक्ष्य आउटपुट मूल्य बढाउने र निश्चित मापनका केही उद्यमहरूसँग सहयोगका लागि वार्ता गर्ने हो। थप रूपमा, गत बर्षमा, आपूर्ति श्रृंखला र फ्रेंचाइजी चेन बजार विकास प्रवृत्ति भएको छ, र डेल्कोले पनि यसमा सामेल हुने कि नगर्ने विचार गर्नेछ।
अटो पार्ट्स सर्कल: यस वर्ष, जिing्गडोong र अली मोटरगाडी अफ्टरमार्केटमा प्रवेश गरे, जसले उद्योगमा सनसनी उत्पन्न गर्‍यो। तपाईं यसको के सोच्नुहुन्छ? स्पार्क प्लग उद्योगमा के परिवर्तन गरिएको छ?
याang Wenqin: मलाई लाग्छ कि यो राष्ट्रीय ब्राण्ड को लागी एक राम्रो चीज हो, किनकि धेरै ठूला ब्रान्डहरु अब ठूला ब्रान्डहरु छन् कि उपभोक्ताहरु, त्यहाँ बिक्री पछि कुनै ग्यारेन्टी छैन, र मूल्य धेरै उच्च छ। जहाँसम्म, देश मा एक विश्वसनीय र सस्तो ब्रान्ड छ भने, उपभोक्ता निश्चित छनौट हुनेछ। यसैले, डेल्कोले विगत दुई बर्षमा घरेलू बजारमा प्रवेश गर्ने छनोट गर्‍यो, जुन राष्ट्रिय ब्रान्डको पहिचानको लक्ष्य लिएको थियो।
पोष्ट समय: अप्रिल १ 15-२०२०